Ndị ọrụ 50,000 na-eme njem nlegharị anya na Jamaica Laa azụ na Job n’ọnwa isii gara aga
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » Ndị ọrụ 50,000 na-eme njem nlegharị anya na Jamaica Laa azụ na Job n’ọnwa isii gara aga
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Minista njem nlegharị anya nke Jamaica, Hon. Ihe nlele Edmund Bartlett (nke abụọ n'aka ekpe) ube oyibo na -esi ísì ụtọ sitere na Kande's Delights ka onye isi ụlọ ọrụ ahụ, Kevin Dean (n'aka nri) na -ele. Onye na -ekerịta ihe ugbu a bụ odeakwụkwọ na -ahụ maka ozi ministri ahụ, Jennifer Griffith (n'aka ekpe) na Richard Pandohie, onye isi oche otu na -ahụ maka ọrụ nrụpụta, Council Njikọta Njem Nleta. Ihe omume ahụ bụ njem nlegharị anya na 2th Staging of Christmas na July nke emere ụnyaahụ (July 7) na Jamaica Pegasus Hotel, New Kingston.
Industrylọ ọrụ njem nlegharị anya nke Jamaica eweghachitere ihe karịrị ndị ọrụ 50,000 n'ime ọnwa 6 gara aga, na-egosi ike ya maka nnabata na ikike ịlaghachi na nsogbu.
Na mmemme ụnyaahụ nke ekeresimesi n’ọnwa Julaị, Mịnịsta ndị njem na-ekwupụta ozi banyere ndị ọzọ na-arụ ọrụ na mba ahụ.
O kwukwara na ihe ruru ndị ọbịa 700,000 kwụsịrị na ọnwa 7 gara aga.
Jamaica Tourism na-arụ ọrụ na ọ ga-erute 1 nde ọbịa na ndị njem na njedebe nke August.
Mịnịsta njem, Hon. Edmund Bartlett, kwupụtara nke a ụnyaahụ (22 Julaị) na stage nke asaa nke ngosi ahia "Christmas na July" na Hotel Jamaica Pegasus, New Kingston. Ebumnuche a na-eme kwa afọ na-agba ume ịzụrụ ezigbo ngwaahịa mpaghara site n'aka ndị metụtara ya na mpaghara ndị njem na ụlọ ọrụ Jamaica na-achọ onyinye maka ndị ahịa na ndị ọrụ.
“Ọzọkwa, n’ime ọnwa 7 gara aga, anyị akpọbatala ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọbịa 700,000 (kwụsịtụrụ) ma, ka ọ na-erule ngwụcha ọnwa Ọgọst, anyị ga-erute otu nde ndị ọbịa na ndị njem na-abata Jamaica, nke ga-eweta ebe na mpaghara US $ 1.5 ijeri n'ime akụ na ụba mpaghara. Onweghi ulo oru ozo nwere ike ime nke a n’ime onwa asaa; industrylọ ọrụ ndị njem nwere, "Minista Bartlett gwara ndị na-ege ntị nke ndị nnọchi anya mba, ndị metụtara njem nleta na ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ Jamaica.
N'ịtụle ikike ụlọ maka ndị na-ebubata ngwaahịa n'obodo ahụ, Mịnịsta Bartlett kwuru, sị: "Ka anyị na-agbake, ọ dị anyị mkpa ịgbake ọnụ ma nwetaghachi ike. Anyị kwesịrị ịkwụghachi ọtụtụ ihe ndị furu efu anyị nwere tupu ọrịa a ebute n'ihi na tupu ọrịa ahụ a na-efe efe, anyị nwere ọnọdụ iyi mmiri nke dollar US site na ụlọ ọrụ nke ihe dịka 60 cents. Anyị eruola ogo nke njigide 40. "
Onye nlekọta njem ahụ kwuru Jamaica ga-akwaga gafere 40 cents na 50 cents njigide ọnụego, na-arịba ama na "ọrịa a enyela anyị ohere a n'ihi na anyị na-amalite site na ala efu ka anyị wee gbakee ọnụ."